क-कसले पढ्न पाउने ११ कक्षा? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home शिक्षा क-कसले पढ्न पाउने ११ कक्षा?
असार ३, २०७३- एसएलसी परीक्षामा सहभागीमध्ये चार लाख ८२ हजार नौ सय ९८ विद्यार्थीले कक्षा ११ अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । एक लाख ५ हजार एक सय ५४ जनाले समग्र स्तरीकृत अंक (जीपीए) न्यूनतम १.६ ल्याउन नसकेकाले अयोग्य भएका छन् ।
एसएलसीमा नियमित र एक्जाम्टेड गरी पाँच लाख ८८ हजार एक सय ५२ विद्यार्थी सहभागी थिए । परीक्षा दिएकामध्ये ८२.१२ प्रतिशतले माथिल्लो कक्षा चढ्न पाएका छन् । एसएलसी सुरु भएयताकै धेरै विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइएको यो पहिलो हो । अयोग्यमा परेका १७.८८ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले पनि प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
‘१.६ जीपीए नल्याउनेलाई पनि प्राविधिकतर्फ व्यावसायिक शिक्षा लिने व्यवस्था गरेका छौं,’ बिहीबार एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, ‘सबैले मास्टर र पीएचडी गर्दैनन् । रोजगारीमूलक सीप सिक्न १.६ भन्दा कम जीपीए ल्याउनेलाई कुनै बाधा हुँदैन ।’
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को बुधबारको बैठकले कक्षा ११ मा विज्ञान समूहमा भर्ना हुन २ र अन्यमा कम्तीमा १.६ ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्ष एसएलसीको परिणाम जीपीएका आधारमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो । यो विधिबाट नतिजा आएपछि विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवाला भने अन्योलमा छन् ।
विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीए अंक कति प्रतिशत र कुन ग्रेडमा पर्‍यो भन्नेमा सबैको चासो छ । कार्यालयले विगतमा मार्कसिटमा कुन विषयमा कति अंक आयो भनेर राख्ने गर्थ्यो । यस वर्ष त्यसको सट्टा ग्रेड (ए प्लस देखि ई सम्म) राखेको छ ।
त्यस्तै गत वर्षसम्म श्रेणी छुट्याउने विधि हटाएर ग्रेडसिटमा जीपीए (०.८ देखि ४ सम्म) हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा सय पूर्णांक हुन्थ्यो भने यसपालि अधिकतम जीपीए ४.० हुन्छ । परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार नियमिततर्फ चार लाख ३७ हजार तीन सय २६ जना परीक्षामा सहभागी भएकामा ३.६ भन्दा माथि ४ जीपीए ल्याउने १६ हजार चार सय ५४ छन् ।
सार्वजनिक नतिजाअनुसार ०४८७९९८ ‘डी’ सिम्बोल नम्बर भएका विद्यार्थीले ४.० जीपीए प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने ३६ जनाले ३.९५ जीपीए ल्याएका छन् । यस्तै ३.९० ल्याउनेको संख्या २ सय ६५ छ ।
३.२ भन्दा माथि ३.६ सम्म ल्याउने ४१ हजार ५ सय ७७ जना छन् । २.८ जीपीएभन्दा माथि ३.२ सम्म ल्याउनेमा ४८ हजार ६ सय ११, २.४ भन्दा माथि २.८ सम्म अंक ल्याउने ६३ हजार १ सय ८१ जना छन् ।
त्यस्तै २ भन्दा माथि २.४ ल्याउने ९४ हजार सात सय १६ जना छन् । १.६ भन्दा माथि २ जीपीएसम्म एक लाख चार हजार दुई सय ७८ विद्यार्थी छन् । १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउने ५६ हजार ७ सय ६३ छन् ।
०.८ भन्दा माथि १.२ सम्म अंक ल्याउनेको संख्या ८ हजार छ भने ०.८ सम्म मात्र अंक ल्याउनेको संख्या ११ जना छ । मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने ३ जना परीक्षार्थीहरूको सबै विषयको परीक्षा रद्द गरिएको छ भने तीन सय ८० जनाको एउटा विषयको परीक्षा रद्द गरेको नियन्त्रक काप्रीले बताए ।
एसएलसी परीक्षाको ८३ वर्षे इतिहासमा यो अन्तिम हो । यसपालि परीक्षा भएको ६९औं दिनमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । प्राविधिक धारको भने एक सातापछि मात्र नतिजा सार्वजनिक गरिने काप्रीले बताए ।
एसएलसीको नतिजामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या न्यून देखिएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने १ लाख ६९ हजार ८ सय २३ विद्यार्थी मात्रै छन् । यो एसएलसी दिएका विद्यार्थीको ३८ प्रतिशत मात्रै हो ।
जब कि ३० देखि ५९ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको संख्या साढे दुई लाख छ । यो संख्या परीक्षामा सहभागी हुनेको ५८ प्रतिशत हुन्छ । यो तथ्यले विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।
अनिवार्य गणितमा २९ अंक (डी र ई ग्रेड) भन्दा कम ल्याउने २ लाख पाँच हजार पाँच सय ६४ छन् । यसमध्ये १९ अंक पनि ल्याउन नसक्नेको संख्या १ लाख ४६ हजार ९ सय ३५ छ ।
त्यस्तै अनिवार्य अंग्रेजीमा एक लाख ५७ हजार १ सय ८४ जना विद्यार्थीले २९ अंक पनि प्राप्त गरेका छैनन् । यसमध्ये ७१ हजार १ सय २४ विद्यार्थीले १९ अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन् । विज्ञानमा एक लाख ९५ हजार ८ सय ८९ जनाले २९ अंक पनि ल्याएका छैनन् ।
अझ २० भन्दा कम अंक ल्याउनेको संख्या १ लाख १० हजार २ सय ७४ छ । अनिवार्य सामाजिक शिक्षातर्फ एक लाख १२ हजार ३६ जनाले ३० भन्दा कम अंक ल्याएका छन् ।
यस्तै नेपालीमा ३० भन्दा कम अंक ल्याउनेको संख्या ६६ हजार ७ सय ९ रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले गणित विषयमा कम अंक ल्याए पनि त्यही विषयमा ९० भन्दा माथि ल्याउनेको संख्या पनि अत्यधिक छ । उक्त विषयमा २३ हजार ३ सय ३४ जना विद्यार्थीले ९० भन्दा बढी अंक (ए प्लस) ल्याउन सफल भएका छन् ।
यस्तै अंग्रेजीमा १२ हजार पाँच सय ५२, विज्ञानमा ६ हजार ८ सय २७, सामाजिक शिक्षामा २ सय १७ र जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा चार हजार तीन सय ४१ जनाले ए प्लस ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।
सबैभन्दा कम ए प्लस ल्याउनेमा अनिवार्य नेपाली परेको छ । यो विषयमा ६३ जना विद्यार्थीले मात्रै ९० भन्दा माथि अंक ल्याएका छन् ।
पूरक परीक्षा साउन दोस्रो साता
दुई विषयसम्म डी र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले साउन दोस्रो साता पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
नियन्त्रक काप्रीका अनुसार सैद्धान्तिकतर्फ डी र ई ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले साउन १४ देखि २१ सम्म पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन् । पूरक परीक्षामा सहभागी भई ग्रेड वृद्धि गर्दै जीपीए बढाएमा विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेछन् ।
उनका अनुसार सैद्धान्तिकतर्फ डी र ई ल्याउने नियमिततर्फ १ लाख ८ हजार ३ सय २६ र एक्जाम्टेडतर्फ ३९ हजार दुई ५७ विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउँछन् ।